तिम्रो झुटो र बन्द कोठाको राजनीतिक व्यापार कहिले सम्म ? - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ३ असार २०७८, बिहीबार १२:४८ मा प्रकाशित
नेपाल एक विश्वको अधिपत्य भूमिमा आज देशमा राजादेखि प्रजासम्म कोही राष्ट्रप्रति इमान्दारी नहुँदा दूरअवस्था भोग्नु परेको छ । राजादेखि अहिलेका प्रजासम्म सम्पुर्ण नेतृत्ववर्ग दोषी देखिन्छन किनकि कहिले राजाले राज्य गरे त कहिले कलियुगका नव राजाहरुले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन । जसले जे भने नि नेपालमा हुने खेल विदेशीकै हो यसमा कोहि दुई मत छैन्न यहाँ नेपाल र नेपाली कि त सिआईए कि त ‘रअ’ कै हातमा छन । राजा शासन देखि प्रजाको शासन सम्पुर्ण राज्यका विशिष्ट व्यक्ति सबै भाडाका टटु र गुलामीका लागि मात्र आएका अथवा ल्याएका छन । सबै यहाँ दलालका पात्र मात्र हुने खेल भएका देखिछन ।
के आज कलियुगका लाज भन्ने शब्द कुनै मान्छे नांगै(निर्वस्त्र) हिड्दा मात्र लाग्ने हो ?
यहाँ कोहि छैन्न राष्ट्रभक्त सबै कसै न कसैले पालन पोषण गरेर राखेका छन । जतिसुकै आर्दशका कुरो गरेपनि यहाँ केहि हुनेवाला छैन । यहाँ हुन्छ त केबल भता पचाउने पाटो, कुनै दूतवासलाई प्रतिवेदन बुझाएर भता बुझनेहरु नै आज राष्ट्रभक्त हुँ भनेर छाति फुलाएर हिडेका छन । तिनीहरुलाई कति पनि के लाज छैन ? के आज कलियुगका लाज भन्ने शब्द कुनै मान्छे नागै(निर्वस्त्र) हिड्दा मात्र लाग्ने हो ? नराम्रो काम गर्दा चाँहि लाज लाग्दैन ?
आज राष्ट्रमा “राजा आउ देश बचाउ” भन्दा पनि उनी सक्रिय हुदैन्न भने उनी कुनै परिबन्धमा परेका वा ठुलो खतराको भुमरीमा अल्झेका त छैनन् ?
कहाँ हरायो नेपालीको स्वाभिमान ? कसले बेच्दैछ राष्ट्र ? कसले बेच्यो राष्ट्रको खोला नाला र स्रोत साधन सबै थाहा छ । यहाँ राजा पनि कथित हुन हैन भने उसले राष्ट्र सकंटमा हुदाँ केहि गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ, राष्ट्रलाई निकास दिन सक्नुपर्दछ । आज राष्ट्रमा “राजा आउ देश बचाउ” भन्दा पनि उनी सक्रिय हुदैन्न भने उनी कुनै परिबन्धमा परेका वा ठुलो खतराको भुमरीमा अल्झेका त छैनन् ?
अर्को तिर राष्ट्रमा भएका आफुलाई राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी बुद्धिजीवि भन्ने व्यक्तिहरु, बरिष्ट पत्रकारहरू, सञ्चार माध्यम अथवा मिडियाहरू र मिडियावालाहरू किन मौन छन ? उनीहरू पनि दुई–चार पैसामा बिकेकै हुन त ? कसै न कसैको चक्रबिउँका परेका नै हुन त ? नत्र राष्ट्र यत्रो संकटको भुमरीमा फसिरहदाँ-डुबिरहदाँ पनि किन राष्ट्रको निम्ति आर्दशको भाषण बाहेक अरू केहि गर्न सक्दैन्न । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि आज राष्ट्रभक्त र राष्ट्रवादी भन्नेहरू पनि कसै न कसैका गुलामी, भताखानेवाला र बोक्रे- खोक्रे राष्ट्रवादी मात्र हुन ।
अर्काको नुन पानी खाएपछि नुनको सोझो गरिएन भने आफु र आफनै परिवारको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्दछ । कमरेड मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रकै हालतमा पुगिन्छ ।
नेता सबै कसै न कसैका भरौटे हुन । कुनै काम लाग्ने छैन्न भाडाको मान्छे हुन त के नै गर्न सक्दछन र ? अर्काको नुन पानी खाएपछि नुनको सोझो गरिएन भने आफु र आफनै परिवारको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्दछ । कमरेड मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रकै हालतमा पुगिन्छ । आज देशमा के भईरहेको छ ? सबै अरूकसैको आदेशमा भईरहेको छ ।
जनता कोहि सुःखी, कोहि खुःशी छैन्न, खुःशी होलान् त केबल अहिले सतामा भएका पार्टीका झोले कार्यकर्ता र सरकारका नुन पानी खाने कर्मचारी । आज राष्ट्रमा एक कुशल नेता नेतृत्वको खाँचो र खडेरी परेको छ । त्यो कसले निर्वाह गर्ने हो ? भन्ने कुरा हेर्ने काम बाकी नै छ । नेपाली जनताले राजतन्त्र पनि हेरे, प्रजातन्त्र पनि हेरे, लोकतन्त्र पनि हेरे, गणतन्त्र पनि हेरे तर खै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र यी सबै अनुभूति गर्न पाएको ?
मेरा देशका इमान्दारी नेतावर्गहरु सम्पुर्ण जनतालाई प्रष्ट गर्नु जरुरत छ । हैन भने कमरेड प्रचण्डको पुत्र र राजा वीरेन्द्रको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिदैन ।
के सबै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तिमीहरुले बिदेशीको लागि ल्याइदिएको हो ? त्यसो भए किन कथित क्रान्ति गरेर सोझा नेपालीको ज्यान लियौ ? किन दुःख, कष्ट र पिडा दियौ ? मेरा देशका इमान्दारी नेतावर्गहरु सम्पुर्ण जनतालाई प्रष्ट गर्नु जरुरत छ । हैन भने कमरेड प्रचण्डको पुत्र र राजा वीरेन्द्रको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिदैन । कतिन्जेल सम्म लुट्छौ ? कतिन्जेल सम्म सोझा नेपालीको आँखामा छारो हाल्छौ ? प्रष्ट गरिनु पर्दछ । जसले जे भनेनी नेपालको राजनितिक सबै कूनै फाइभ स्टारका बन्द कोठामा दुई जना बीच भएका सम्झौता र सहमति बाहिर जानै सक्तैन नत्र ज्यान र पदको नै जोखिम पर्छ ।
तिमीहरुले नेपाल र नेपालीका लागि राजनिति गरिराखेका छौ ? कि अरु कसैको भाडामा राजनिति गरिराखेका छौ ? हैन भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा किन केहि सोच्दैनौ ? के तिमीहरुको राजनितिक भनेको भष्टाचार गरि धेरै सम्पति आर्जन गर्नु, आफना परिवारलाई नेता, ससंद र मन्त्री बनाउन मात्रै गरेका थियौ ? आफना कार्यकर्ता पोषण र जनता मार्ने कामको लागि मात्र राजनितिक गरेका हौ ? त्यसो भए ठिकै छ समयले नै बताउने छ बाकी कुराको परिमाणहरु ।
देश यो हालत हुनुमा नेतृत्व कमजोर हुनु हो । यो देशको राजनितिको मालिक,चावी र चालक अरू नै छन ।
देश र जनता कसैका प्यादा होइनन । २०१५ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई खेर गएको जस्तै अहिले सत्तामा भएको नेकपामा भएको दुई तिहाइ दम्भ र घमण्डले आफैलाई घाटा नहोस र नेकपा नै सखाप हुने अवस्था ननिम्तिओस। अहिलेको चुनाबको नतिजा ४१/४३ लाख मत ल्याएका कांगेस/नेकपाको मतमा फरक आउने छ । यो २०७४ सालको चुनाबमा तिमीहरुले ल्याएको मत भनेको नेपालमा रहेका मतदाताको मत हो । वैदेशिक रोजगारिमा रहेका र राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानि रहेका ६४ लाख मतदाता (युवा-युवती) यदि नेपाल भित्रिए भने तिनिहरूको पसिना खाएका छौ । तिमिहरू उच्चवर्गले भोलि पसिनाको मुल्य चकाउनु नपरोस बेलैमा विचार गरियोस ।
यदि नेतृत्त्ववर्गले पनि नेपाल देश बनाउने र नेपाली जनताको हितको निम्ति राजनिति गर्दथे भने यो देशको यो हालत हुने थिएन । देश यो हालत हुनुमा नेतृत्व कमजोर हुनु हो । देशको राजनितिको मालिक, चावी र चालक अरू नै छन । नेपाली नेतृत्ववर्ग/नेताहरू/राष्टवादीहरू भनेका खलासी मात्र हुन । खलासीको काम भनेको ढोका ढकढकाउने र भाडा उठाएर मालिक र चालकलाई बुझाउने मात्र हो । हे यो देशका राजनितिक दलहरुको मालिक महाराजाहरु स्पष्ट जवाफ देउ जनतालाई तिम्रो झुटो र बन्द कोठाको राजनितिको व्यापार गर्छौ कहिले सम्म ?
जय गोरख !!!
बद्रि कुमार कार्की ‘बद्रि प्रयाश’